Muqdisho oo mudaharaadayaal lagu dhaawacay | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Muqdisho oo mudaharaadayaal lagu dhaawacay
Muqdisho oo mudaharaadayaal lagu dhaawacay
Ugu yaraan seddex qof oo shacab ah ayey dhaawacyo kala duwan soo gaadheen kaddib rabshad muddo kooban ku dhexmartay dekedda caalamiga ah ee Muqdisho ciidamadda booliska dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo mudaharaadayaal, kuwaasoo ay haleeshay rasaas ay fureen askarta qaarkood si ay u kala kaxeeyaan dadkaasi.
Rabshaddaasi ayaa la sheegay inay sabab u ahayd xoogsatada oo koray markab ganacsi oo badeeco ku dejinayay dekedda weyn ee Muqdisho, si ay uga soo dejiyaan badeecada, balse intii aysan hawshaasi dhammaynin ay u yimaadeen masuuliyiinta shirkadda Albayrak ee maammusha dekedda oo ay la socdaan boolis waxayna ku armeen xoogsatada inay markabka isaga soo degaan, iyaga oo markii ay xoogsatadu diideen amarkaasi ay ciidanku xoog bannaanka uga soo saareen gudaha dekeddaasi.
Madaxda shirkadda Albayrak oo laga lee yahay waddankaasi Turkey ayaa dhowaan si rasmi ah loogu wareejiyay hawlaha dekedda Muqdisho, waxayna sheegeen inay adeegsanayaan qalab casri ah oo aysan u baahnayn xamaali farabadan oo badeecadaha saara ama ka soo dejiya maraakiibta ku soo xiranaya marsadda magaaladaasi.
Dhinaca kale, xildhibaano ka tirsan golaha barlamaanka Soomaaliya ayaa dood ka keenay shirkaddaasi, wuxuuna guddoonku u yeeray ra’iisulwasaare Cabdiweli Sheekh Axmed si su’aalo looga weydiiyo arrinta Albayrak.
Albayrak ayaa imminka wejihaysa cabasho aad u xooggan oo ay wadaan xoogsato isugu jira muruqmaal iyo majakuus taageero ka helaya howlwadeenada shirkaddaha kale ee maraakiibta ganacsiga.
Previous articleBurcad haysatay weriye ajnabi ah oo sii daayay
Next articleGalguduud: hawlgallo ay wadaan isbaheysiga